चितवन उद्योग संघको अध्यक्षमा दुवाडी
चितवन । चितवन उद्योग संघको अध्यक्षमा भेषराज दुवाडी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । संघको १८औँ वार्षिक साधारणसभा तथा नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार शुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा अध्यक्षमा दुवाडीको मात्रै उम्मे...
बैंकर्स संघको अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
काठमाडौँ, नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका लागि ढुंगानाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भएका हुन्...
मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले निगममा बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका युवा तथा विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरुले आज नेपाल आयल निगमका निमित्त महा...
एक महिनाभित्र सेजमा ऊर्जा उपलब्ध गराइने
काठमाडौँ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतासहित सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना गरिएका उद्योग सञ्चालनार्थ आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध हुने भएको छ । सेजमा उद्योग सञ्चालन ग...
तीन करोड ५० लाखका ३ सय ३४ फरक फरक रंगका कुर्सी कसका लागि तयार हुँदै छन् ?
काठमाडौँ, पुस १९ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हल झकिझकाउ पार्न विभिन्न रङका महँगाे कार्पेट र सिट कभर मिलाउन थालनी गरेकाे छ । प्रतिनिधिसभाको हलमा आकासे निलो र राष्ट्रियसभ...
जुत्ता प्रदर्शनीमा करिब रु साढे दुई करोडको कारोबार
काठमाडौँ । फुटबेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसनको आयोजनामा भएको १४ औँ जुत्ता प्रदर्शनीमा करिब रु साढे दुई करोडको कारोबार भएको छ । यही पुस १३ गतेदेखि भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीहलमा भएको प्रदर्शनीमा करिब...
मौरी चराउने किसानको आम्दानी वार्षिक ३० लाख
मोरङ । तपाईले गाईभैंसी चराएको त देख्नु वा सुन्नु भएकै होला, तर किसानले मौरीसमेत चराउँछन् भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छन् । तर यो कुरा सत्य हो । मोरङको रंगेली–३ स्थित रञ्जनीका किसान यमनाथ पाठकले मौर...
अनुदानितभन्दा सस्तो मूल्यमा गैरअनुदानित मल
काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मलभन्दा सस्तो मूल्यमा गैरअनुदानित मल कृषकका खेतबारीमा पु¥याएको छ । कर्पोरेशनले एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट नामक बहुतत्वयुक्त रा...
पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो, कुन तेलको कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढाएको छ । सोमबार रातिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेगरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डिजेल, मट्टिटेल, ग्यास सिलिण्डर र हवाई इन्धनको भाउ बढाएको...
पूर्वसांसदलाई दश अर्बका कार्यक्रम
निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेका वेला सरकारले निवर्तमान सांसदहरूमार्फत १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार ...
काठमाडौं १८ पुस । नेपाल आयल निगमले सोमबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य ब...
आगामी वैशाख तेस्रो साता घरेलु उद्योग महोत्सव
काठमाडौँ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आगामी वैशाखमा ‘नेपाल १४औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५’ आयोजना गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र...
युवालाई व्यावसायिक बनाउन तरकारी र नगदे बालीमा अनुदान
कञ्चनपुर । विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको कृषि शाखाले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि रु चार लाख ४० हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको ...
पाँचौँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस चितवनमा मनाइने
चितवन । पाँचौँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस विशेष कार्यक्रमका साथ पूर्वी चितवनमा मनाइने भएको छ । पाँच वर्ष अघि २०७० सालमा सरकारले पुस १७ गतेलाई पोल्ट्री दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल कुखुरा व्यवसा...
एनसेल मेला हाटखोलामा नाचगान
काठमाडौं । एनसेलले शनिवार विराटनगरको हाटखोलामा आयोजना गरेको एनसेल मेला २०७४ मा दर्शकहरुले भरपुर मनोरञ्जन लिएका छन् । कम्पनीले आफ्ना ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरुसँग थप नजिक हँुदै खुसियाली साटासाट गर्ने र दु...
शेयर बजारको लगानी घट्दै
शुक्रबार, पुस १४, २०७४
बनेपा । दुई सातादेखि निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेको प्रभाव मोफसलको शेयर बजारमा पनि पर्न थालेको छ । मोफसलमा खुलेका ब्रोकर कार्यालयका शाखामा शेयर बजारप्रति आकर्षण घटेका कारण लगानीकर्ताक...
सिमेन्ट उद्योगमा बढ्यो वैदेशिक लगानी
काठमाडौँ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा एक पछि अर्को गर्दै वैदेशिक लगानी भित्रन शुरु गरेको छ । होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले आगामी फागुनबाट उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको बेला, चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनले...
अप्रत्याशि मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा
विराटनगर । सिमेन्ट र छडको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । गत मंसिरमा प्रतिबोरा रु ८९५ पर्ने ओपिसी सिमेन्ट अहिले प्रतिबोरा रु ९२५ देखि रु ९५० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ...
कार्कीलाई कृषिबाट फलिफाप, एक हजारको लगानीबाट एक करोडको सम्पत्ति
म्याग्दी । आजभन्दा ४० वर्ष पहिले ‘विदेश पनि जान्न, जागिर पनि खान्न’ भन्ने अडानका साथ रु एक हजारको लगानीबाट कृषि पेशा शुरु गरेका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराका चन्द्रबहादुर कार्की अहिले रु एक करोडभ...
बैंकसँग ऋण दिने पैसा छैन, अबका दिन सकसपुर्ण
काठमडौं १३ पुस । मुुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भखैरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । ...